जेठ ०३, २०७४ - मान्छेको भीड । भीडको कुनाबाट कोही अनुनय गर्दै थियो– हजुर मेरो कुरा सुनिदिनुस् न ! कुरा सुन्ने एकछिन समय होला ! भीडबाट एक जनाले हकार्यो– आज मन्त्रीज्यूलाई भेट्न गाह्रो छ । भोलि आउनुस् । ऊ मैलो लुगामा थियो । लठ्ठी...
फागुन २, २०७३ - धुम्बाराही– श्री गोरखनाथ मार्ग । एक सय सतासी नम्बर घर । छानामा पशुपति इनर्जी कम्पनी लिमिटेडको साइन बोर्ड थियो । सँगै टाँसिएको थियो– माया खोला हाइड्रो पावर । दोस्रो तलाको भित्री कोठा अघि नै खुला थियो । बाहिरसम्म आएर स्वागत...
‘कराँते खेलाडी’ जलविद्युत विकासका अभियन्ता
माघ १८, २०७३ - भद्रपुरतिरबाट आएको ‘राम’ भन्नेले कुनै बेला तोपगाछी (झापा) मा हंगामा मच्चाउँथ्यो । ऊ बडो कौशलका साथ ‘किक’ हान्थ्यो । साइकलको चेन घुमाउँथ्यो । स्वचालित चुप्पी (नाइफ) चलाएर सबैलाई चकित पार्थ्याे । उसलाई देख्दा सायद गाउँका केटाकेटीको सातो जान्थ्यो । केही...